राजदूत शाक्यद्वारा इजरायली राष्ट्रपति समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश – SajhaPana
राजदूत शाक्यद्वारा इजरायली राष्ट्रपति समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश
साझा पाना २०७५ फागुन ३ गते ०९:४४ मा प्रकाशित
इजरायलका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा. अन्जना शाक्यले इजरायली राष्ट्रपति रेउभेन रिभ्लिन समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोह माझ उनले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेकी हुन ।
इजरायली राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आयोजित समारोहमा नेपाली राजदूत शाक्यलाई अति विशिष्ट सम्मान दिईएको थियो । त्यस अवसरमा राजदूत डा. शाक्यलाई विशिष्ट सम्मान ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको थियो ।
समारोहमा राजदूत डा. शाक्य र इजरायली राष्ट्रपति रेउभेन रिभ्लिनबीच आधा घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्ताका क्रममा डाक्टर शाक्यले राष्ट्रपति रिभ्लिन समक्ष नेपालका सातवटै प्रदेशमा इजरायलको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी अर्थात इजरायली प्रविधिको तालिम केन्द्र खोल्नका लागि प्रस्ताव गरिन ।
राजदूत शाक्यले नेपालमा हुन गइरहेका लगानी सम्मेलनमा भाग लिन तथा नेपालमा लगानी गर्न इजरायली उद्योगपति तथा व्यापारीहरुलाई आह्वान गरिन । उनको आह्वानसँगै त्यहाँका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिष्ठित उद्योगपति तथा व्यापारीहरु सकारात्मक बनेका छन्। उनीहरुले नेपालमा हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनमा भाग लिएर नेपालमा लगानी गर्न इच्छा समेत व्यक्त गरेका छन्।
राजदूत डा. शाक्यले इजरायलको राष्ट्रभाषा हिब्रुमा समेत सम्बोधन गर्दा इजरायली राष्ट्रपति रिभ्लिनदेखि सरकारी कर्मचारी र इजरायली मिडियाहरुले उनको प्रशंसा गरेका थिए । इजरायली मिडियाले राजदूत डा. शाक्यको समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका छन् ।
ट्याग : #अन्जना शाक्य